ချဲလ်ဆီးနှင့် သူ၏ ချစ်သူများ: August 2008
လန်ဒန်-ဒါဘီ ပွဲဟာ အကြိတ်အနယ် ရှိမယ်လို့ ထင်ခဲ့ရပေမယ့် တကယ့်တကယ်တမ်း ကစားတော့ စပါးက ခံစစ်ကို ဦးစားပေး ကစားခဲ့ပါတယ်။ စပါးခြေက သာမာန်လောက်သာ ရှိပေမယ့် ချဲလ်ဆီးတို့ အပိုင်အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးခဲ့တာကြောင့် ဂိုးမပြက်သည့်အပြင် အနိင်တောင် မရရှိခဲ့ပါဘူး။ စပါးကတော့ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး ၁ မှတ်ကို အသင်းကြီးဆီက ရလိုက်တာ ကံကောင်းပါတယ်။
ဒီနေ့လူထုတ်ပုံက မဆိုးဘူးဆိုပေမယ့် ရှေ့တန်းမှာ အနယ်လ်ကာ ၊ ဂျိုလ်ကိုးလ် အတွဲဟာ အခုထိကို အခြေအနေမကောင်းသေးပါဘူး။ ဘလက်တီ ကန်တင်ပေးတာကို အနယ်လ်ကာ အပိုင်ရပေမယ့် အသုံးမကျခဲ့တာကြောင့် ချဲလ်ဆီးတို့ ဂိုးရဖို့ နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လမ်းပတ်ကန်ချက်ကို ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်နိင်ခဲ့တာရယ် ၊ အက်ဆီယန်ကစ်ဟာ ဘားထိသွားခဲ့တာရယ်ကြောင့်ပဲ သရေတမှတ်ပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အဆိုးဆုံး ကစားသမားကတော့ အနယ်လ်ကာနဲ့ ဘောင်ဆင်ဝါပါပဲ။ လုံးဝကို သုံးစားမရပါဘူး။ ဒရော့ဘာ မလာမချင်းကတော့ ဒီတိုက်စစ်မှုး အစုတ်ကိုပဲ သုံးရပါဦးမယ်။ ချဲလ်ဆီးကစားတာ ဒီနေ့လည်း မကြိုက်ပါဘူး။ ဒါအပြင် ကစားသမားတွေက အသင်းလက်ရွေးစင်တွေ များတာကြောင့် ရှေ့လာမယ့် အပတ်ဟာ ပွဲပန်းဒဏ်တွေနဲ့ ကြုံတွေ့ရပါဦးမယ်။
ပထမပွဲ အနိင် ၊ ဒုတိယပွဲ အနိုင် ( ၁ ) ဂိုး ၊ အခု တတိယပွဲ သရေဟာ တဖြည်းဖြည်း ဆုတ်ယုတ်လာပါတယ်။ စကိုလာရီက အစောကြီးကတည်းက အနယ်လ်ကာကို မထုတ်ဘဲ ထားတာ သူ့အမှားပါ။ အဆင်မပြေပါဘူး ချဲလ်ဆီးတွေရေ။ ၀ူး။ စိတ်မောတယ်။
ချဲလ်ဆီးအတွက် ပထမဂိုး - ဘလက်တီ
ဒုတိယချေပဂိုး - ဒါးရင်းဘန့်
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:31 PM 1 comment: Links to this post
မနက်ဖြန်မှာ ကစားမဲ့ ချဲလ်ဆီးပွဲဟာ အကြိတ်အနယ် ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာ အာစင်နယ် အသင်းက ၃ ဂိုးပြက် နယူးကာဆယ်ကို အနိင်ရသွားတာကြောင့် အသင်းကြီးတွေနဲ့ အမှတ်ကွာစေရန် အလို့ငှာ ချဲလ်ဆီးတို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားရပါလိမ့်မယ်။ နောက်တစ်ချက်က ဘာလဲဆိုတော့ စပါးပါ။ ရာသီမစခင် ကတည်းက သန်းပေါင်းများစွာ အကုန်အကျခံပြီး လူသစ်တွေ ခေါ်ယူခဲ့ပေမယ့် စပါးဟာ ရာသီအစ ၂ ပွဲစလုံး ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတာကြောင့် လက်ရှိအောက်ဆုံး အဆင့်မှာ ရပ်တည်နေခဲ့ရတာကို ကျေနပ်နေကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ တတိယမြောက်ပွဲစဉ်မှာ အနိင်ကန်ချင်ပေမယ့် တဖက်အသင်းကလည်း ချဲလ်ဆီးဖြစ်နေတာကြောင့် သိပ်တော့ ဖွင့်ကစားရဲမှာ မဟုတ်သလို အလွယ်တကူလည်း အရှုံးပေးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အနည်းဆုံး စပါးအသင်း အနေဖြင့် သရေတော့ အနည်းဆုံး ခံကစားပါလိမ့်မယ်။ ချဲလ်ဆီးအတွက် ကံကောင်းတာက အိမ်ကွင်း ဖြစ်နေချင်းပါ။ အိမ်ကွင်းဆိုတာကြောင့် ခံသာပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနည်းဆုံးတော့ ၃ မှတ်ရအောင် ယူပါလိမ့်မယ်။ ကြည့်ကောင်းမဲ့ မြို့ခံပြိုင်ဘက်တွေပါပဲ။ ချဲလ်ဆီးက ဘောလက် ၊ အက်ဆီယန်တို့ နာနေတာကတော့ နစ်နာစရာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က ဂျိုလ်ကိုးလည်း ခြေထောက်မှာ ရေခဲကပ်ထားတာ တွေ့တာကြောင့် ပါလာပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမ်စရာပါ။
တဖက်အသင်းက စောင့်ကြည့်ရမယ့် ကစားသမားကတော့ ဒီနှစ်မှာဝယ်ထားတဲ့ ခရိုအေးရှားကွင်းလယ်လူ လူကမော်ဒရစ် နဲ့ အင်္ဂလန်လူငယ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ဘန်တလေပါ။
ချဲလ်ဆီးတို့ အနိင် ၃ မှတ်ကိုတော့ ယူနိင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကဲ....စောင်ကြည့်ကြပါစို့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:39 AM No comments: Links to this post
2007/08 ရာသီ၏ ချဲလ်ဆီး၏ အကောင်းဆုံး ဂိုးများကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံး ဂိုးသွင်းသွား နိင်သူက ဒရော့ဘာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒရော့ဘာ အသင်းကို မြန်မြန်ပြန်လာစေချင်ပါပြီ။ ကဲဒီမှာ ဒေါင်းလုပ်ချလိုက်ကြပါဦး။
Scolari is likely to be missing several players for the clash, with Michael Essien and Michael Ballack rejoining the injury list this week.
The German tookaknock on the opening day of the season against Portsmouth, while the Wigan game was Essien's first since our friendly against Lokomotiv Moscow at the beginning of August.
'I lost one or two players more for this game, sure one. After the last game I said some players played because they wanted to help the Chelsea team. They are not only players, they are men,' said Scolari.
'I expect Drogba to be ready for the game against Manchester City because now we have 14 days for training, he isn't ready for the national team, so Monday maybe he plays in the reserve team for 45 minutes.'
Tottenham would think they would start the season better than they have. I know Juande [Ramos] and the players for Tottenham.
I know you ask me maybe about Cluj from Romania, I know more than you think. I know they have 11 Portuguese people playing there, and I follow them because when I was in the national team, I heard news about Cluj every week. I have all the information about them, and Bordeaux and Roma, who are big opponents,' he explained.
Posted by ဆိုးသွမ်း at 12:45 AM No comments: Links to this post
ဒီနှစ်အတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ပွဲစဉ်များကတော့ မဲခွဲလို့ ပြီးပါပြီ။ ချဲလ်ဆီးကတော့ ရိုးမားတစ်သင်းကလွဲလို့ ကျန်သည့် အသင်းများ အနေဖြင့် ဟန်ချက်ပျက်လောက်အောင် ခြောက်လှန့်နိင်ခြင်း မရှိပါဘူး။ ရိုးမားကိုလည်း အဝေးကွင်းမှာသာ တချက်ကြည့်ရမှာပါ။ ကံကောင်းတယ်ပဲ ပြောပြော ကံဆိုးတယ်ပဲ ပြောပြော ဘယ်အသင်းနဲ့ကျကျ ဒီနှစ်လူအင်အား ကစားကွက်နဲ့ကတော့ ရင်ဆိုင်နိင်ပါတယ်။
ရင်ဆိုင်မယ်လေ ရင်ဆိုင်မယ်လေ........ :)
ဒီနှစ်အတွက် ဆုများကိုတော့ ချဲလ်ဆီး ကစားသမား သုံးယောက်တိတိလုံးက ရရှိသွားပါတယ်။
ဒီနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံးဂိုးသမားဆုကို - ပီတာဆက်ခ်ျ
ဒီနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး နောက်တန်းဆုကို - ဂျွန်တယ်ရီ
ဒီနှစ်အတွက် အကောင်းဆုံး အလယ်တန်းဆုကို - လမ်းပတ်
တို့က ထိုက်တန်စွာ ရရှိသွားပါတယ်။ ဟေး ဟေး ။ ချဲလ်ဆီးကွ ။
ရှောင်ရိုက်ဖီးလစ်မှာ မန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းသို့ ပေါင် ၈.၅ သန်းဖြင့် ပြန်လည်ရောင်းချရန် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရိုက်ဖီးလစ်အား ချယ်ဆီးအသင်းက ပေါင် ၂၂ သန်းဖြင့် လွန်ခဲ့သော သုံးနှစ်က မန်စီးတီးအသင်းမှ ၀ယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုက်ဖီးလစ်မှာ ယနေ့ မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းတွင် ဆေးစစ်မည်ဖြစ်ပြီး တစ်ပတ်လျင်ပေါင် ရှစ်သောင်းဖြင့် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုက်ဖီးလစ်အား အဲဗါတန်အသင်းကလည်း ၀ယ်ယူရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့သေးပြီး ယခင်မန်စီးတီးသူရဲကောင်းက မန်စီးတီးအသင်းသို့ ပြန်သွားရန် ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရိုက်ဖီးလစ်မှာ အသင်းသို့ ရော်ဘင်ဟို ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သဖြင့် ပထမကစားသမားနေရာအတွက် မန်စီးတီးအသင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Good Luck !!!!! RightPhillip
Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:15 AM No comments: Links to this post
Premier League - Chelsea to secure Robinho within 48 hrs
Chelsea chief executive Peter Kenyon has said his club will secure the signing of Robinho from Real Madrid in the next 48 hours.
New Chelsea boss Luiz Felipe Scolari has been chasing the Brazil international since he took over at Stamford Bridge earlier this summer.
But that long pursuit finally appears to be nearingaconclusion as Scolari looks to addathird new recruit to his squad, following the captures of Deco and Jose Bosingwa.
Robinho, who played under Scolari for the Brazil national side, has made it clear that he wants to quit the Bernabeu and last week begged Real directors to negotiateadeal with Chelsea.
Having initially been reluctant to let the forward leave, Real now appear to have relented and the Spanish giants are willing to sell the wantaway star forareported 36 million euros (£28.75m).
Robinho's agent Wagner Ribeiro confirmed an agreement was in sight.
"A deal is about to be reached," he said in the Guardian. "Robinho's time in Spain has come to an end. He is looking forward to being part ofanew project."
ချယ်ဆီးအသင်းမှာ ရော်ဘင်ဟိုအား ယူရို ၃၅ သန်း (ပေါင် ၂၇ သန်းဖြင့် )ဖြင့် ခေါ်ယူရန် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း မာကာ သတင်းစာအရ သိရသော်လည်း အမှန်တကယ် အသုံးပြုခဲ့သည်မှာ ပေါင်သန်း ၇၀ ခန့်အထိရှိကြောင်း ဆန်းသတင်းစာက တွက်ပြခဲ့သည်။ ပထမသုံးငွေမှာ ရော်ဘင်ဟို ချယ်ဆီးသို့ ရောက်ရှိရေးအတွက် ပေးရသော ယူရို ၃၅ သန်းအပြင် ရော်ဘင်ဟို ရောက်ရှိလာမည်ဖြစ်သောကြောင့် အသင်းတွင် မလိုအပ်တော့သော ရှက်ချင်ကို နှင့် ရိုက်ဖီးလစ်တို့အား ပေါင် ၄၃ သန်းအရှုံးခံပြီး ဖယ်ထုတ်ရတော့မည်ဖြစ်သည်။ ချယ်ဆီးအသင်းက ဗြိတိန်စံချိန်တင် အပြောင်းအရွှေ့ကြေး ပေါင် ၃၀.၈ သန်းဖြင့် ခေါ်ယူခဲ့သော ရှက်ချင်ကိုမှာ ချယ်ဆီးအသင်းတွင် ၂ နှစ် ကစားခဲ့ပြီးနောက် အေစီမီလန်အသင်းသို့ ၁၂ လအငှါးဖြင့် ယမန်နေ့ညက ပြောင်းရွေ့ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က ခေါ်ယူထားသော ရိုက်ဖီးလစ်အားလည်း ပေါင် ၉ သန်းဖြင့် ပေါင် ၁၂ သန်း အရှုံးခံပြီး မန်ချက်စတာ စီးတီးအသင်းသို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ချယ်ဆီးအသင်းမှာ ပိုင်ရှင်သစ် အေမရာဗိုဗစ် အသင်းသို့ရောက်ရှိပြီးကတည်းက ပေါင် ၇၃၆ သန်းသုံးစွဲခဲ့ပြီးဖြစ်သကဲ့သို့ ၅၇၈ သန်းမှာ ကစားသမား အပြောင်းအရွှေ့အတွက် အသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်တွင် ဒေကိုနှင့် ဘောစင်ဝါအတွက် ပေါင် ၂၄ သန်းအသုံးပြုပြီးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:48 PM No comments: Links to this post
On his transfer today (Monday) to AC Milan, Andriy Shevchenko has expressed gratitude for the support he received during his two seasons at Chelsea.
The move back to Italy was completed this afternoon followingamedical examination and immediately afterwards, Shevchenko made the following statement.
'I would like to thank Chelsea Football Club - the fans, staff, players and management - for all the support you gave me during my time at the club.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ရှက်ချန်ကို ။ အောင်မြင် အဆင်ပြေပါစေဗျာ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:06 AM No comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 10:12 PM No comments: Links to this post
"Chelsea FC have agreed terms for Andriy Shevchenko to return to AC Milan," the London club confirmed on their website.
"Details of the deal will remain confidential."
The 31-year-old Ukraine striker has been linked withamove back to the Rossoneri after two difficult seasons in England, during which he only scored nine Premier League goals in 47 appearances.
He will complete the switch subject toamedical, ending weeks of negotiations that were recently made public by the Italian club.
"Afteraseries of frenetic phone calls during the whole day, we reached an agreement with Chelsea. Tomorrow he will be in Milan, Monday he will undergoamedical and then signacontract," Galliani told Milan's television channel.
"We have managed to bring homeaplayer who has scored the most goals in our shirt in the last 50 years."
Chelsea are expected to takeamassive loss on the £30 million they paid for the player in 2006.
Shevchenko scored 182 goals in seven seasons for Milan and is widely regarded asahero in the city.
Blues owner Roman Abramovich had previously wanted the former Dynamo Kiev hit-man to stay at Stamford Bridge, despite three separate managers failing to pick him as first-choice.
Milan have been looking forastriker after finding their options limited in attack.
Ronaldo is still recovering fromalong-term injury, Alberto Gilardino has been sold to Fiorentina, Alex Pato is only 18 years old and Filippo Inzaghi is nearing the end of his career at the age of 35.
Shevchenko will provide competition for places along with Marco Borriello, who returned to the club afterasuccessful loan spell at Genoa.
ဒရော့ဘာ ၊ ရှက်ချန်ကို ၊ ဘောလက် တို့ကတော့ ဒီပွဲမှာ လွဲချော်နိင်ပါတယ်။ ဘောလက်က ပို့စ်မောက်နဲ့ ပွဲမှာ ဒဏ်ရာ အနည်းငယ် ရခဲ့တာကြောင့်ပါ။ အဝေးကွင်း ယှဉ်ပြိုင်ရမဲ့ ဒီပွဲစဉ်မှာ ၀ီဂန်က အိမ်ကွင်းဖြစ်တာရယ် ၊ ပထမဆုံး ပွဲစဉ်မှာ ၀က်စ်ဟမ်း အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ ရှုံးနိမ့်ထားတာကြောင့် အနိင်မရရင်တောင် သရေရအောင် ခံကစားပါလိ့မ်မယ်။ ချဲလ်ဆီးအသင်းမှ ပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့ မဲလ်ချွိုတ်ကလည်း အစွမ်းကုန် တားဆီးမှာပါ။ ၀ီဂန်ရှေ့တန်းက ဟက်စကီးကတော့ မနေ့က အင်္ဂလန်ပွဲမှာ လေးလံစွာနဲ့ပဲ ကစားသွားပါတယ်။ ဒီပွဲမှာလည်း ချဲလ်ဆီးတွေ ခြေအသာ လူအသာနဲ့ ကစားရဦးမှာပါ။
ချန်ပီယံဆိုတာ အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း မရွေးဘူးမဟုတ်လား။ ဒီပွဲမှာတော့ ဒဏ်ရာကြောင့် နာနေတဲ့ အက်ဆီယန်ကို ပြန်မြင်တွေ့နိင်ပါတယ်။ အပေါ်ကတော့ ကျွန်တော် ခန့်မှန်းထားတဲ့ ဖြစ်နိင်ခြေ လူစာရင်းပါ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:52 PM No comments: Links to this post
သတင်းကတော့ မှန်ကန်ပါတယ်။ သူတကယ်ရောက်လာပါပြီ။ ချဲလ်ဆီးလို အသင်းကြီးမျိုးဟာ ဒီလို ကစားသမား လေးတွေ မွေးထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူ့ရွေးချယ်တာ မှန်ကန်တယ်လို့ ထောက်ခံပါတယ်။ :) သူဌေးကလည်း စွတ်ခေါ်နေတော့တာပဲ။ သူများတွေကို အားတောင် နာလာပြီ။ အဟီးဟီး။
သူ့ပုံကို ကြည့်ကြပါဦး။ ပုံစံကတော့ ခပ်စုတ်စုတ်ပါပဲ။ :P ကစားတာကတော့ စကေးရှိမဲ့ရုပ်။ သတင်းကတော့ ဒီမှာပါ။
၀က်ဆိုဒ်က ထုတ်ပြန်တာပါ။ အားလည်း နာတယ် ။ ခင်လည်း ခင်တယ်။ လူလည်းများတယ်။ ပိဆံလည်း ရှိတယ်။ ကစားကွက်လည်း ကောင်းတယ်။ နည်းပြလည်း တော်တယ်။ ကစားသမားတွေက မာန်အပြည့်နဲ့။
လူအမြင်ကတ်အောင် လုပ်နေသလို ဖြစ်နေပြီ။ ဟီးဟီး။ စိတ်မရှိပါနဲ့။ စတာ။ :P
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:14 AM No comments: Links to this post
ချဲလ်ဆီးက စပို့တင်း လစ္စဘွန်းတိုက်စစ်မှူး ဖာဘီယို ပိုင်ကို အငှားစာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူ လိုက်ပါတယ်။ အသက် (၂၀)အရွယ် တိုက်စစ်မှူးကို ချဲလ်ဆီးက တစ်နှစ်အငှားစာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အမြဲတမ်းစာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးလည်း ရှိနေပါတယ်။
လက်ရှိ တိုက်စစ်မှူးတွေထဲက ကလောဒီယို ပီဇာရိုကလည်း ဂျာမန်ကလပ် ၀ါဒါဘရီမင်ကို အငှားစာချုပ်နဲ့ ပြောင်းရွေ့သွားသလို ရှက်ဖ်ချင်ကိုရဲ့ အနာဂတ်ကလည်း စတန်းဖို့ဘရစ်ခ်ျမှာ ဆက်နေဖို့ မသေချာတဲ့ အနေအထားမှာ ရှိပါတယ်။ ပေါ်တူဂီကလပ် စပို့တင်းဟာ မန်ယူစတား ရော်နယ်ဒိုတို့လို လူငယ်ကစားသမားတွေကို မွေးထုတ်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီး အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆန်းတို့စ်ဆိုတဲ့ ကစားသမားလေးလည်း ရှိပြီးသားပါ။ လူစုံတော့ ၁ နှစ်လုံးစာ အေးဆေးပေ့ါဗျာ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 10:56 PM No comments: Links to this post
ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှူး ဒီဒီရာ ဒရော့ဘာဟာ ဒဏ်ရာကြောင့် အောက်တိုဘာလ မကုန်ခင်အထိ ကစားနိုင်မှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ လက်ရွေးစင်အသင်းနည်းပြ ဘာဟစ် ဟာလယ်ဟိုဇစ်က ပြောပါတယ်။
အသက် (၃၀)အရွယ် တိုက်စစ်မှူးဟာ ဒီနှစ်အစောပိုင်းကတည်းက ဒူးဒဏ်ရာ ဝေဒနာကို ခွဲစိတ်ကုသမှု ခံယူခဲ့ရလို့ ချဲလ်ဆီးရဲ့ ရာသီအကြို ခြေစမ်းပွဲတွေကို လွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။
ဒရော့ဘာဟာ လောလောဆယ် အိုင်ဗရီကို့စ်အသင်းနဲ့အတူ ခြေစမ်းပွဲ ကစားဖို့အတွက် ပြင်သစ်ကို ရောက်ရှိနေပေမဲ့ နည်းပြကတော့ နောက်ထပ် (၆)ပတ်လောက်အထိ ကစားနိုင်မှာ မဟုတ်သေးဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
တစ်လအတွင်း ဒရော့ဘာ ပြန်ကစားနိုင်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ တစ်လခွဲလောက်တော့ ရှိနိုင်ပါတယ် လို့ အိုင်ဗရီကို့စ်နည်းပြက ပြောပါတယ်။
သူ စပြီး ပြေးနိုင်ပေမဲ့ မိုဇမ်ဘီကွတ်နဲ့ ကစားမဲ့ ကမ္ဘာ့ဖလား ခြေစစ်ပွဲမှာတော့ ပါဝင်နိုင်မှာ မဟုတ်သေးပါဘူးစတန်းဖို့ဘရစ်ခ်ျ နည်းပြ စကိုလာရီကတော့ ဒရော့ဘာ ပြန်အလာကို စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ချဲလ်ဆီးဟာ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က ပရီးမီးယားရှစ် အဖွင့်ပွဲမှာ ပို့်စ်မောက် (၄)ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ရပြီး အမှတ်ပေးဇယားကို ထိပ်ဆုံးကနေ ဦးဆောင် နေပါတယ်။သူဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီအတွင်းမှာ ချဲလ်ဆီးအတွက် (၁၅)ဂိုး သွင်းပေး ထားပါတယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:38 AM No comments: Links to this post
နိင်ငံတစ်နိင်ငံမှာ ကစားသမားကောင်းတွေ ပေါများနေရင် ၊ အထူးသဖြင့် ဘောလုံးအားကစားလို အကျော်ကြားဆုံး အားကစားလိုမျိုးမှာ ကစားသမားကောင်းတွေ စုနေရင် အသင်းခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ဘယ်နည်းပြအတွက် မဆို ရွေးရခက်တက်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အင်္ဂလန် အသင်းကြီးမှာလိုပေ့ါ။ လီဗာပူးလ်က ဂျရတ် ၊ မန်ယူက ဖာဒီနန် တို့လည်း ရှိနေရဲ့သားနဲ့ ချဲလ်ဆီးက တယ်ရီက အင်္ဂလန်ကပ္ပတိန် လက်ပတ်ကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ လက်ပတ်ဆိုတာ တန်ဖိုးတေ့ာ မရှိပေမယ့် ဂုဏ်တော့ရှိတာပေ့ါ။ အင်္ဂလန်အသင်းကြီးကို ကိုယ်စားပြုပြီး ကန်နေတာ ချဲလ်ဆီးအသင်းခေါင်းဆောင် တဖြစ်လဲ သူပါပဲဆိုတာ ချဲလ်ဆီးအသင်းအတွက် ဂုဏ်ယူစရာပါ။
“ John's big personality is why I chose him but Rio is also important for the team which is why I made him vice-captain."
"Rio, when he was captain, played very well - the same level as John," he added. "It was not easy for me to choose because they are very good players."
But Terry - also his club's captain - was given the armband and will now be charged with leading England to qualification for the 2010 World Cup in South Africa.
Terry made his England debut asasubstitute inafriendly against Serbia & Montenegro in June 2003, establishing himself in the side the following season.
He has scored four goals for his country, including England's first at the rebuilt Wembley Stadium against Brazil in June last year.
Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:10 AM No comments: Links to this post
မွေးနေ့မှသည် နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ချစ်သောသူများနှင့် အတူတကွ နေထိုင်ရပြီး ၊ ဘုရားသခင်လည်း အမြဲ စောင့်ရှောက်ပါစေ ၊ ချဲလ်ဆီးကိုလည်း ထာဝရ အားပေးနိင်ပါစေလို့ ချဲလ်ဆီးချစ်သူများဖြစ်တဲ့......
ကိုရင်နော်၊ ကိုကောင်လေး၊ ကိုအောင်၊ ကိုဖန်ဆင်းရှင်၊ ကိုလွမ်းလုလင်၊ ကိုဖိုးစံ၊ ကိုမင်းကျန်စစ်၊ ကိုအိမ်မက်သစ်၊ ကို wynnsun၊ ကိုတက်စလာ၊ ကိုknowledgevilla၊ ကိုheartmuseum၊ ကို99၊ ကိုဝင်းဇော်၊ ကိုဒီရေ၊ ကိုဘလာဂေါက်၊ ကိုကိုဖရီး၊ ကိုStanley၊ ကိုစိုးထက်၊ ကိုကလိုစေးထူး၊ ကိုကိုဝဿန်ဦး၊ မဆုရည်၊ မမေ၊ မမိုးချစ်သူ၊ မစိုးမြနန္ဒာသက်လွင်၊ မသိုးမလေး ၊ ကိုနေမင်းခ ၊ ကိုရုပ်ဆိုး ၊ ကိုမိုးမောင် ၊ ကို BlueBoy ၊ ကိုအောင်မျိုးဟန် ၊ ကိုဝိဥာဉ် ၊ ကိုကောင်းကင်ကို ၊ ကိုချမ်းမြေ့ ၊ ကိုအဇ္ဈတ္တပြခန်း ၊ ကိုအောင်စိုး တို့မှ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါသည်.......။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:40 AM5comments: Links to this post
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:14 PM 1 comment: Links to this post
ပို့စ်မောက်လို မာကျောတဲ့ အသင်းတစ်သင်းကို ချဲလ်ဆီးတို့ ဂိုးပြက်နိင်ခဲ့တာ ၀မ်းသာ စရာပါ။ ရာသီအစလည်း ဖြစ်ပြန် ၊ နည်းပြ အသစ်လည်း ဖြစ်တဲ့ အပြင် ဘာစီလိုနာရဲ့ ကမ္ဘာကျော်ကွင်းလယ်လူ ဒေကိုရဲ့ အစွမ်းပကားတွေနဲ့ ချဲလ်ဆီးတို့ ပထမဦးဆုံး ပွဲကို အနိင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ တချက်ထိ စနစ်တွေနဲ့ ဘရာဇီးအသင်းကဲ့သို မြင်စေရပါမယ် ဆိုတဲ့ စကိုလာရီရဲ့ နည်းပြမှုဟာလည်း အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ရာသီအစမှာ အခုလို ထိပ်ဆုံးက ဦးဆောင်နိင်ခဲ့တာ ကိုက ဒီနှစ်အတွက် ကံကောင်းခြင်းများနဲ့တေ့ာ မဆိုင်လောက်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ နောက်တပတ်မှာလည်း အဝေးကွင်းမှာ ကန်ရမဲ့ ၀ီဂန်လို အသင်းမျိုးကို အောင်ပွဲခံရဦးမှာပေ့ါ။ အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာဆိုသလို ချဲလ်ဆီးအသင်းသားများ အနှောင်းလည်း သေချာဖို့ လိုပါတယ်။ ကဲ....ဒီလိုနဲ့ပဲ အောင်ပွဲတွေ ဆက်ခံလိုက်ကြပါစို့ ချဲလ်ဆီး ချစ်သူများရေ....
1St Goal By Joe Cole
3rd Goal By Lampard
4th Goal By Deco
First Hight Light
Second Hight Light
Good Luck Chelsea`s Lovers
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:47 PM No comments: Links to this post
Chelsea : Portsmouth FC
ဖြစ်နိင်ခြေ ရှိသည့် လူစာရင်း
Joe Cole ............Lampard...................Ballack...................... Deco
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:16 PM No comments: Links to this post
ချဲလ်ဆီးက သူရဲ့ အလွတ်ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ တိုက်စစ်မှုး Pizarro ကို ၀ါဒါဘရီမင်သို့ အငှားချလိုက်ပါတယ်။ အသက် ၃၁ နှစ်ရှိပြီ ဖြစ်တဲ့ 2007/08 ရာသီမှာ ၂၁ ပွဲကစားပြီ ၂ ဂိုးသာ သွင်းယူနိင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ အတူ ဂိုးပေါင်း မြောက်မြားစွာ သွင်းယူခဲ့ပေမယ့် ချဲလ်ဆီးမှာ ခြေစွမ်း မပြနိင်တာကြောင့် အငှားချလိုက်ခြင်း ဖြစ်နိင်ပါတယ်။ အခုတော့ တိုက်စစ်မှုးတစ်ယောက်လျော့ သွားပေမယ့် အလယ်တန်းတွေနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်လို့ ရပါတယ်။ ဒရော့ဘာ ၊ ရှက်ချန်ကို နာနေတဲ့ အပြင် အကာလူးကလည်း အိုလံပစ်မှာ သွားရောက်ကစားနေ တာကြောင့် လောလောဆယ် တိုက်စစ်မှုး အနယ်လ်ကာ တစ်ယောက်သာ အားထားရမှာပါ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:01 PM No comments: Links to this post
Two days before the Premier League season commences, Deco has revealed his excitement at making his Blues debut.
The 30-year-old was Luiz Felipe Scolari's first signing as Chelsea manager, and has quickly settled into life at Stamford Bridge, with some superb displays in pre-season.
After four years at Barcelona, Deco has been impressed with everything around the club, not least the supporters, who he met for the first time at our Fan Day on Monday.
'The fans are very passionate for the club and the players, and I like that,' he began.
'I liked Fan Day and was surprised how many people were there, taking their holidays to see us! I think it is good because the Chelsea fans are so enthusiastic for the team and the coach and new players, it is good for us and we have to do our best in the games for them.'
That work begins on Sunday when we entertain Portsmouth inalunchtime kick-off, and the midfielder is looking forward to pulling on the blue jersey for the first time inacompetitive fixture.
'Yeah, I am excited because it will beagood experience,' the number 20 said. 'We have had many training sessions and pre-season games, which have been very good.
'I hadalittle problem last week but now I am okay. I want to start well at Chelsea, and make sure we win.'
If selected, Deco is likely to be inamidfield alongside Frank Lampard, who this week committed his long-term future to the club. That was an important move for both club and player, the Portuguese playmaker believes, and he anticipatesastrong partnership developing between the pair.
The 30-year-old England international's old deal was set to expire in the summer of 2009 and he was the subject ofatransfer bid from Inter's former Blues boss Jose Mourinho, which Chelsea rejected.
Lampard's new contract takes him through to the summer of 2014, when he will be 35. Chelsea originally offered Lampardafour-year deal, which he had refused to sign.
"Negotiations have been going onalong time with Chelsea," Lampard said. "With what happened in my personal life over the last few months [Lampard's mother died in April], I asked Chelsea for some time to get my head straight.
"I spentalot of time with my family and worked out what I wanted to do. I'm 30, and I just wanted to make the right decision.
"I've had seven fantastic years here and now I can have five more, and hopefully finish my career here. Whether that will be in five years time or more, I don't know."
Lampard also commented on the speculation that linked him toareunion with Mourinho, saying that he was tempted but that the club - and his family - helped him make the decision to stay.
"Everyone knows that Inter Milan madeabid for me, and of course that was an option," he admitted.
"I had to think about whether I wanted to be in London or away from London. Coming back to Chelsea and training with the boys made me realise the relationship I have with the club.
"My team-mates were very important in the decision, especially the captain John Terry.
"If we all work together I think the team can achieve success."
Much was made of Lampard's desire foralonger contract, and the wages he demanded, which he admitted were factors in talks.
"Everyone knows that the financial aspect of any negotiation is very important," he added.
"I'm very pleased I signed the five-year deal, because I think I can play for many years to come. Chelsea always stated they wanted to keep me, and that wasagood thing for me."
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:31 AM No comments: Links to this post
Australia : Ivory Coast ပွဲမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချဲလ်ဆီး တိုက်စစ်မှုး ဆလိုမွန် ကာလူးလ်ဟာ ဂိုးတွေ သွင်းယူနေပါတယ်။ ဒါကတော့ ဒီကနေ့ ကန်ခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ ၁ လုံးထဲသော ဂိုးကို သွင်းယူသွားခဲ့တဲ့ ဟိုက်လိုက်လေးပါ။ အိုလံပစ်မှာ သက်ကြီး ကစားသမား ၃ ယောက်ပါဝင်ခွင့် ရှိပေမယ့် ဒရော့ဘာကတော့ မသွားခဲ့ပါဘူး။ အခုလို ကာလူးလ်ဂိုးတွေ ရနေတာ ကျေနပ်စရာပါ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:21 PM No comments: Links to this post
Michael Ballack is ready to challenge for four titles this season as he looks ahead to 2008/09 with Chelsea TV tonight.
Ballack talks about the past and his hopes for the future at 6.45pm in The Big Interview on Chelsea's official television channel.
'I am happy and I am prepared for this season, last season I wasn't, I was out, but now everything is fine and I am looking forward to playing next season,' said the German captain.
'We couldn't win the title, we were very close, but in the end we lost, and everybody was disappointed about this.
'But we have to look forward to the next season. We haveagood squad and another chance to win four titles.'
Before The Big Interview you can get all the latest from the Fan Day with Blues News at 6.30pm, when Petr Cech tells Chelsea TV why he enjoys training in front ofacrowd.
There are also highlights from yesterday's training session between the Chelsea Ladies and the Chelsea Old Boys.
Posted by ဆိုးသွမ်း at 11:03 PM No comments: Links to this post
ဒါက အခုနွေရာသီမှာ ချဲလ်ဆီးကို ပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ကိုဆိုးသွမ်း ဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျားးးးးးးးး။ ဟေး ဟေး
ကဲ....ကျွန်တော်ကတော့ ရာသီအသစ်မှာ အကျီအသစ် ၊ စိတ်ကူးအသစ် ၊ အားမာန်အသစ်တွေနဲ့ အားပေးဖို့ မျှော်နေတယ်ဗျို့။ ကြွားတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့ ။ ကြွားတာပါ။ :P
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:49 PM No comments: Links to this post
ပို့စ်မောက် အနေဖြင့် ချဲလ်ဆီးနှင့် ပွဲအတွက် ယုံကြည်မှု ပိုရှိလာတယ်လို့ ဒေးဗစ်ဂျိမ်းက ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကွန်မြူနတီဒိုင်းမှာ မန်ယူနဲ့ သရေကျအောင် ကန်နိင်ခဲ့တာကြောင့်ပါ။ အဲဒီပွဲကို ကြည့်လိုက်ရမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ပြောတာ မမှားနိင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ပို့မောက်စ် အနေဖြင့် တိုက်စစ်ကို လုံးဝ ပျောက်နေခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူက နာနီ ဖောက်တာကို ခုခံကာကွယ်နေရတာနဲ့ပဲ တချိန်လုံး ခံစစ်သာ ဆော့ကစား သွားတာပါ။ အသစ်ပြောင်းလာတဲ့ ပီတာခရော့ခ်ကလည်း ဖြစ်မြောင်အောင် မစွမ်းဆောင် နိင်ပါဘူး။ ပို့စ်မောက်က Distin , Diop , Campbell တို့ကောင်းလို့သာ ဒီလောက်ထိ ခံနိင်ခဲ့ခြင်းပါ။ James အနေနဲ့ကလည်း တိဗက်ဇ် လှည့်ကန်တဲ့ အလုံးကို ကာကွယ်လိုက်နိင်တာက လွဲလို့ တခြားဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မဖမ်းခဲ့ရပါဘူး။ ဒါကြောင့် နှစ်သင်းစလုံးသာ အပြန်အလှန် ကစားကြပေမယ့် တိုက်စစ်ပိုင်း အားနည်းခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာ အလယ်တန်း အားသာတဲ့ အသင်းကတော့ ဖိကစားသွားနိင်တာပေ့ါ။ မန်ယူမှာ ရော်နယ်လ်ဒို ၊ ရွန်းနီ ပါလာရင်တော့ ဘယ်လိုဖြစ်မယ် မသိပေမယ့် အခုမန်ယူ တိုက်စစ်ကတော့ သာမန်လောက်ပါပဲ။ အဆိုးဆုံးကတော့ ပို့စ်မောက် တိုက်စစ်လုံးဝ ပျောက်ခဲ့တာကြောင့် မန်ယူနောက်တန်းကို မခြိမ်းခြောက်နိင်ခဲ့တာပါ။
ပို့စ်မောက် အနေဖြင့် ချဲလ်ဆီးနဲ့ အဖြေ ဘယ်လိုလာမယ်ဆိုတာ စောင့်ကြည့်ကြပါစို့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:24 PM No comments: Links to this post
2008 / 09 ရာသီအတွက် နည်းပြ စကိုလာရီကတော့ အခုလို ကစားသမားတွေ အတွက် ကျောနံပတ်တွေကို သက်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးကတော့ အာဂျင်တီးနား ယူ-၂၁ လက်ရွေးစင် ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန်းတို့စ်လေးကို ကျောနံပတ် - ၉ ပေးခဲ့တာပါပဲ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:26 AM No comments: Links to this post
Real Madrid star Robinho claims he is mulling over offers from several clubs - including Chelsea.
The relationship between the 24-year-old and his club appears to have deteriorated since the Spanish champions refused to release the Brazil international for this month's Olympics, claiming he hasagroin strain.
However, Robinho took part in the Emirates Cup -apre-season tournament alongside Hamburg, Juventus and hosts Arsenal - last weekend.
The former Santos attacker has already expressed his desire to work with compatriot Luiz Felipe Scolari, who took over the Chelsea reins on July 1.
And Robinho reiterated on Monday that his future in the Spanish capital is far from certain as the new season approaches.
He told GloboEsporte.com: "I still don't know whether I will continue [at Real Madrid]. It's not defined yet.
"The season is just starting and I've been given some offers from other clubs. I have one from Chelsea, but nothing has been sorted out yet. We are just talking."
Robinho also spoke of his disappointment at not taking part in the Olympics.
"Watching the Olympic team play on television is so bad," he said. "I wanted to be there with the group, but Real Madrid did not want to release me. I am truly sorry for that."
ချဲလ်ဆီးရဲ့ ကွင်းလယ်လူသစ် ဒေကိုက ရီရဲလ်မက်ဒရစ် တိုက်စစ်မှူး ရော်ဘင်ဟိုကို ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ပါတယ်။
ပေါ်တူဂီကွင်းလယ် ဖန်တီးရှင်က ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူး ရော်ဘင်ဟိုဟာ စတန်းဖို့ဘရစ်ခ်ျ ပရိတ်သတ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမား ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
ချဲလ်ဆီးအနေနဲ့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်း ရော်ဘင်ဟိုကို ပေါင် (၂၅)သန်းပေးပြီး ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက် ရီရဲလ်ကို တိုက်တွန်း ပြောဆိုသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် (၃၀)အရွယ် ဒေကိုက ရော်ဘင်ဟိုဟာ မယုံကြည်နိုင်လောက်တဲ့ ဘောလုံးစွမ်းရည်တွေရှိနေတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကို စိတ်လှုပ်ရှားမှု ပေးနိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ လို့ ပြောပါတယ်။
သူက မှော်ဆန်ပါတယ်။ ဘောလုံးကွင်းထဲမှာဆိုရင် ဘာမဆို လုပ်နိုင်တဲ့ ကစားသမားမျိုးပါ ။
အသက် (၂၄)နှစ်အရွယ် ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှူး ရော်ဘင်ဟိုဟာ ရီရဲလ်ကို ၂၀၀၅ မှာ ရောက်ပြီး ပွဲပေါင်း (၁၀၁)ပွဲမှာ (၂၅)ဂိုး သွင်းထားပါတယ်။
သူဟာ ရီရဲလ်အသင်းရဲ့ ၂၀၀၆၊ ၂၀၀၇ ရာသီမှာ (၂)နှစ်ဆက်တိုက် လာလီဂါ ချန်ပီယံဖြစ်အောင် အဓိကနေရာကနေ ကူညီထားပြီး ဘရာဇီးအသင်းအတွက် ပွဲ (၅၀)မှာ (၁၅)ဂိုး သွင်းထားပါတယ်။
ဒါပေမယ့် လက်ရှိ ချဲလ်ဆီးမှာ တိုက်စစ်မှုးက ဒရော့ဘာ ၊ အနယ်လ်ကာ ၊ ရှက်ချန်ကို ၊ အကာလူး ၊ ဆန်းတို့စ် ရှိနေပါတယ်။ ဒီအရေအတွက်ဟာ ဘောလုံးအသင်းအတွက် လုံလောက်တဲ့ တိုက်စစ်မှုး အရေအတွက်ပါ။ နည်းပြ စကိုလာရီကလည်း ခေါ်ယူချင်နေသလို ၊ ရော်ဘင်ဟိုကလည်း သူ့အနာဂတ်အတွက် ပြောင်းရွှေ့ချင်နေပါတယ်။ ရီးရဲလ်ကလည်း ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ ပြောထားပါတယ်။ ချဲလ်ဆီးအနေဖြင့် ဒီတိုက်စစ်မှုးကို ခေါ်မယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံကတော့ တော်တော်ကုန်မှာပါ။ မိုဘစ်ခ်ျအနေဖြင့် ပိုက်ဆံရှိသော်လည်း ကစားသမားတွေ ပိုနေမှာ မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အင်အားတော့င်တာ မှန်ပေမယ့် ဘောလုံးသမားဆိုတာ ကစားခွင့်ရမှ ကြေနပ်ကြတာ မဟုတ်လား။ ဒီတော့ လူများရင် ကိုယ်မကစားရရင် စိတ်ညစ်စရာတွေ ရှိလာတဲ့ အခါ အသင်းအတွက် ထိခိုက်လာနိင်တယ် မဟုတ်လား။
ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဘာပဲ ပြောပြော ကိုယ့်အသင်းမှာ ကစားသမားတွေ ဝေေ၀ဆာဆာ ဖြစ်နေရင်တော့ ကျေနပ်နေတာပဲ မဟုတ်လား။ အောင်မြင်တာ မမြင်တာ အသာထား။ ကျွန်တော်ကတော့ အပြာရောင်ဝတ်စုံတွေနဲ့ ချဲလ်ဆီးကစားသမားတွေ ဘယ်လိုအသင်းနဲ့ ကန်ကန် ကြည့်နေရရင် ကျေနပ်တယ်။ ဒါက ကျွန်တော့် အမြင်လေးပါ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:14 AM No comments: Links to this post
“ ချစ်ချစ်ရေ... ၅းဝ တောင် သွင်းတယ်ဟ ”
တမြန်မနေ့က လိုကိုမိုတစ်ကို ပင်နယ်လ်တီမှာ အရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့ ချဲလ်ဆီးဟာ ဒီနေ့မှာတော့ အောင်အောင် မြင်မြင်နဲ့ ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွား ကစားသွားပါတယ်။ Chelsea5:0AC Milan ပွဲမှာ မိုးကလည်း ရွာထားတော့ နှစ်ဖက် အသင်းကစားသမား များဟာ တချက်တချက် ခြေချော်တက်တဲ့ အနေအထားကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မို့လည်း အနယ်လ်ကာရဲ့ ၂ ဂိုးမြောက် ဂိုးဟာ ဂိုးသမား ခြေချော်မှုကြောင့် ရခဲ့တာပါ။ ဒီနေ့ပွဲမှာ အေစီမီလန်က ဂိုးသမား အမှားရယ် ၊ ကစားသမားတွေက လိုတာထက် ပိုမောပန်း နေရတာရယ် ၊ လူမစုံတာ ရယ်ကြောင့် ချဲလ်ဆီးတို့ ဂိုးအပြက်နဲ့ အနိင်ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄ ဂိုးသွင်းသူ - အနယ်လ်ကာ
တချက်ထိ စနစ်နဲ့ ကစားလာတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကစားကွက် ကောင်းလာသလို ၊ ရှေ့တန်းမှာ တိုက်စစ်မှုး တစ်ဦးထားပြီး တောင်ပံက ကစားတဲ့ စနစ်ကို ကျင့်သုံးသွားပါတယ်။ ရှေ့တန်းမှာ နှေးကွေးတက်တဲ့ အနယ်လ်ကာ အတွက် တောင်ပံက မာလူဒါနဲ့ ရိုက်ဖီးလစ် ၂ ယောက်အကူအညီနဲ့ အေစီကို ကစားသွားပါတယ်။ ဒရော့ဘာ ခြေစမ်းပွဲတွေမှာ ရှိနေမယ် ဆိုရင်လည်း ဒီအကွက်ဟာ အသုံးဝင်နေဦးမှာပါ။
အိုင်ဗန်နိဗစ်ခ်ျ ၏ စွမ်းဆောင်ရည်
ဒီနေ့ပွဲအတွက် အနိင်ဂိုးများကို လမ်းပတ်မှ ဖရီးကစ်မှ ၄င်း ၊ အနယ်လ်ကာက ၄ ဂိုးသွင်းကာ ဖြင့် ဟိုက်လိုက်များကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
0 :4By Anelka
0 :5Anelka
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:54 PM No comments: Links to this post
Chelsea5:0AC Milan ပွဲ၌ ညာဝန်းကနေ ခြေစွမ်းပြပြ ကစာသွားတဲ့ သူက ဆားဗီးယား ယူ - ၂၁ အသင်းခေါင်ဆောင် ကျောနံပတ် ( ၂ ) Branislav Ivanovic ပါ။ ကျွန်တော်တို့ သတိမထားမိခဲ့တာကတော့ သူ့ကို ဂရန့်မန်နေဂျာ အဖြစ်ကတည်းက လိုကိုမိုတစ် အသင်းကနေ ၀ယ်ယူခဲ့တာပါ။
Date of Birth: 1984-02-22 Novi Sad, Serbia
ချဲလ်ဆီးကို ယူရို - ၈ သန်းနဲ့ ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:33 PM No comments: Links to this post
ပွဲကြီး ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါပဲ။ ဆီဗီလာနဲ့ တွေ့ရမဲ့ ကံ ပါမလာဘဲ အေစီမီလန်နဲ့ တွေ့ကြတာပါ။ အေစီမီလန်ရဲ့ ကာကာကို ချဲလ်ဆီးနောက်တန်း ဘယ်လို ထိန်းချုပ်မလဲ......ချဲလ်ဆီးရဲ့ အလယ်တန်းတွေ ကစားကွက် အသာစီး ရနိင်ပ့ါမလား ဆိုတာ နောက် ၁ နာရီ ကျော်ကျော် အချိန်လေးမှာ တွေ့မြင်ရတော့မှာပါ။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:24 PM No comments: Links to this post
Chelsea Fc ၏ 2008/09 တတိယမြောက် အသင်းအင်္ကျီ ထွက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ယတြာတွေလား ၊ ဘာကို နှစ်သက်နေလဲ မသိပါဘူး။ ဘောလုံးမှာ ရွေးချယ်လေ့ မရှိတဲ့ ဒီအ၀ါရောင် အင်္ကျီကြီးကိုပဲ ထပ်ထုတ်လာပါတယ်။
ကစားသမားတွေကလည်း အသားဖြူဖြူ ( ဥပမာ - မီခေးလ်, အက်ဆီယန် ) တို့လိုပါနေတော့ အ၀ါလေးနဲ့ဆို သိပ်လိုက်မှာပါ။း) ။ ကဲ.....ကြည့်ကြပါဦးဗျို့။
Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:31 PM No comments: Links to this post